उनी भ्रष्टाचारप्रति सरकारको शून्य सहनशीलताको डिङ हाँक्दै थिए भने उनीमातहतका सम्पूर्ण संयन्त्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य मनोबलको प्रदर्शन गरिरहेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्य राजनारायण पाठकले बुझेको ७८ लाखको घूसले सत्य र न्यायको दुर्दशा गर्दै थियो । यो एउटा अवस्था थियो जसमा कसैले पनि आफ्नो भूमिका ठम्याउन सकेको थिएन ।
कसैले भन्न सक्दैन, यस्तो किन भइरहेको छ ? किन हरेक परिवर्तनपछि पुरानै चलन र शासन प्रतिस्थापन भइरहेका छन् ? के छ नेपाली ‘सिस्टम’ को कम्पासमा जोडिएको त्यस्तो कुरो जसलाई कसैले पनि चलाउन सकेको छैन ? जनता कडा आन्दोलनमार्फत परिवर्तनको माग गर्छ, परिवर्तनलाई स्थापित गर्छ तर त्यो परिवर्तनको चक्का अड्किन्छ । जति गरे पनि घुम्दै घुम्दैन । मानिस परिवर्तनका नाममा कविता लेख्छन, ट्वीटरमा रमाउँछन्, फेसबुकमा स्टोरी लेख्छन् । पछि उनीहरू थाहा पाउँछन्– मेलाम्ची अझै तीनचार वर्ष बन्दैन रे । यो अर्कै कुरा हो मेलम्ची नबन्दा पनि काठमाडौंका मानिसले पानी पिएकै छन् । आफ्नै पुरुषार्थले पानी पिउनु र अरू कसैले पानी पिलाउनुमा फरक हुन्छ ।
वामपन्थीहरू प्रम ओलीको नेतृत्वमा पूर्ण समाजवाद आउने विश्वास खोजिरहेका छन् । यति सहज र सुरक्षित अवस्थामा प्रम ओलीले राजनीतिमा विद्यमान असंगति र सामाजिक अप्ठेरा हटाउन चेष्टा गर्ने हो भने परिवर्तन नहुने कारण छैन । जनताले जान्न चाहेको कुरा, जनताकी छोरी राष्ट्रपतिलाई किन चाहिएको हो डेढ अर्बको सुपर पुमा हेलिकप्टर र अठार करोडको गाडी ? कहाँ जानु छ उनले ? सरकारका प्रवक्ताबाट यसको ओठे जवाफ ‘कि राष्ट्रपतिको सवारी रिक्सामा चलाउनु ?’ त आइसकेको छ । त्यो जवाफले दुनियाँ तर्सिएको छैन । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०७:५२